तपाईलाई थाहा छ ? सुन्दर महिला र रक्सी यसकारण उस्तै हुँदारहेछन् | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ ? सुन्दर महिला र रक्सी यसकारण उस्तै हुँदारहेछन्
जब पुरुष कुनै सुन्दर र शारीरिक रुपले आकर्षक महिलालाई देख्छन् तब यसको अनुभूति ठिक त्यही प्रकारको हुने गर्दछ जस्तो रक्सीको चुस्की लिदा वा ड्रग सेवन गर्दा हुन्छ। एउटा नयाँ शोधका अनुसार सुन्दर महिलालाई देख्दा त्यस्तो नशा छाउछ जस्तो कि रक्सी पिउँदा छाउछ।
अमेरिकाको जर्जियास्थित एक संस्थानले गराएको सर्भेबाट यो कुराको खुलासा भएको हो । यो सर्भेमा १४ जना युवा पुरुषलाई केही आकर्षक महिलाको नग्न तस्वीर देखाइएको थियो । ती महिलाहरुको शरीर प्लास्टिक सर्जरीको माध्यमबाट थप आकर्षक बनाइएको थियो । सर्भेबाट थाहा भयो कि यी महिलाहरुलाई हेर्ने बेला दिमागको त्यो भाग सक्रिय हुने गर्दछ जुन रक्सी पिउँदा बेला सक्रिय हुने गर्दछ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि रक्सी पिउँदा जुन मानसिक आनन्दको अनुभूति प्राप्त हुन्छ त्यस्तै सुखद अनुभूति सुन्दर महिलालाई हेदा पनि हुने गर्दछ।
अमेरिकाका शोधकर्ता स्टीवन प्लेटेकका अनुसार यो शोध निकै महत्वपूर्ण छ। यो शोधबाट मानिसमा लाग्ने पोर्नोग्राफीको लत तथा अन्य विकारमाथि अधिक संशोधन गर्न सकिन्छ र पोर्नोग्राफीको लतबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने विषयमा पनि काम गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै यसको असर बलात्कार गर्ने इच्छामा कति पर्दछ यसको अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ। साथै रोकथामको उपाय पनि सोच्न सकिन्छ। एजेन्सी
Previous post: बेलायतमा यसरी सकियो ११ औँ यलम्बरहाङ् कप
Next post: सेक्सले छिट्टो घटाउछ तौल, यस्तो पोजिसन गर्नुहोस् छनोट